Toy ny hoe lehilahy ao Korea no vehivavy. Hihaona koreana
By Manana namana iray aho izay nanao ny fifanakalozana ao Seoul, ary izy no ela mirotsaka ny koreana. Toa tsara sy ny rehetra, fa indray mandeha ianao dia hahafantatra ny namana, dia ny tena lavitra sy mangatsiaka. Izy ireo tsy nahafantatra azy. Firahalahiana, na dia satria izy no menatra fa izy tsy koreana.
Manana namana iray aho izay natao tao Seoul, ary mitondra ny datin izy ireo Koreana nandritra ny fotoana ela. Toa tsara sy ny rehetra, fa rehefa mahalala ny namana, fa lavitra loatra ary ny hatsiaka.
Aho tsy fantatrao
Firahalahiana, na dia satria izy no menatra fa izy dia tsy manana ny entana. (mbola any Azia), koa aho, dia jereo ny ao korea tantara an-tsehatra, ary ny lehilahy rehetra tao Korea mazàna mivazavaza be dia be, ary indraindray ny vehivavy rehefa izy rehetra tezitra sy ny zavatra toy izany. eny e, misaotra anareo rehetra ny heviny. noho izany, misy ny sasany fari-pahefana eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin’ny fiarahamonina koreana. Fotsiny aho te hahalala momba ny fomba ireny olana ireny dia aseho amin’ny tantara, na dia mety ho mihoatra na latsaka an-tsoratra. Iray amin’ireo fotoana bebe kokoa misaotra be dia be aho manambady koreana, ary efa nahita betsaka ny fahasamihafana eo amin’ny lehilahy rehetra ao Korea amin’ny Ankapobeny, ny Tandrefana sy ny olona izay nihalehibe aho. Ny vadiko tsara fanahy tamiko izy, saingy tsy mino aho fa izy no nentim-paharazana koreana. Nihalehibe izy, dia nahita ny ray tehamaina ny reny ny ratra, handrava ny trano, mamo sy mivoaka miaraka amin’ny namana mba hilalao sy hitsena ny vehivavy avy amin’ny sokajin-taona rehetra alohan’ny farany ny fanomezana. Mino aho fa satria ity, ny vadiko foana resented ny rainy sy ialana fihetsika tahaka izany. Na izany aza, nandritra ny fotoana tao Korea sy eo anivon ireo mpivady, hitako be dia be ny fanararaotana amin’ny fanambadiana. Afaka milaza aho fa tsy izany no fady ny any korea kolontsaina, satria io no toerana aho. Ohatra, aho nahita tamin’ny FAHITALAVITRA koreana manatona ny fifandirana ao amin’ny fanambadiana. Rehefa ny olona iray dia ny vadiny no voatifitra, ary matetika izy ireny no mampiseho ny vadiny raha manana mendrika iray. Ao amin’ny kolontsaina Tandrefana, amin’ny ankapobeny dia noheveriny fa na inona na inona vady afaka milaza manamarina ny herisetra ara-batana hanohitra azy, ary amin’ny ankapobeny, dia tsy hiverina intsony ny taloha. amin’ny lafiny tsara, ny vadiny dia tompon’andraikitra ny fikarakarana ratsy. Mazava ho azy, misy be dia be ny fihetsika mahery setra any amin’ny faritra hafa eto amin’izao tontolo izao, fa izaho mihevitra fa azo ekena kokoa ho an’ny daholobe eto. Ny vadiko tsy namely ahy, fa matetika izy no niteny tamiko be dia be nandritra ny ady, ny ankamaroan’ireo Tandrefana ny olona, ary izany no hany zavatra tsikaritro. Amin’ny lafiny iray, izy ihany koa no indraindray dia tena miahy sy be fitiavana. Tsy lazaina intsony fa ny namana angamba dia tsy ny koreana. Ao koreana ny kolontsaina, ary tsy koreana Aziatika dia tsy heverina ho mitovy Koreana, ka dia angamba mahatsapa kely menatra. Tamin’ny andro taloha tao Korea, ny olona ao amin’ny fianakaviana dia ambony noho ny hafa. Ny toe-javatra ny vehivavy dia tena ambany dia ambany. Fa izany andro izany, tanora Koreana kokoa ny tantaram-pitiavana sy malama, tsy toy ny zokiny taranaka. Fony aho tany Korea, namana iray no nilaza tamiko momba izany. Rehefa mpivady mahazo manambady, ny fianakaviana, ny vehivavy no mba hahazoana ireo fanomezam-pahasoavana sy ny handoavana ny fampakaram-bady, ny tanora tsy mahazo ny tombontsoa rehetra, ary ireo antontan-kevitra mifanaraka amin’ny fanasokajiana ho an’ny tanora. Raha ny olona iray no ambony laharana eo amin’ny fiaraha-monina, ohatra, dokotera, dia izy ireo no tokony haka ny fiara miaraka aminy, hankany an-trano, sy ny sisa. Toy ny tanora tovovavy ao India. Tany aloha, ary izany no vaovao ho an’ny olona ho nidaroka ny vadiny. Fa ankehitriny ny lalàna no niova. Mijoko ny vehivavy dia tsy ara-dalàna. Na izany na tsy izany, mbola mahita koreana fomba roa handova ny maha-izy azy ny loholona. Indray mandeha, fony aho tao amin’ny Ascenseur amin’ny koreana ski fialan-tsasatra, dia namely ny vadiny ka sarotra eo anatrehan’ny ray aman-dreniko, fa izy tsy nilaza na inona na inona. Tsy azoko antoka ny momba ny olona miteny koreana, afa-tsy ny momba ny Fiarahana hafa ireo Koreana, satria izy ireo ny hitondra ahy ka tsara fa azoko tsara fanahy, fitiavana, fiahiana sy ny tena tantaram-pitiavana, ny telo ireo Koreana aho amin’izao fotoana izao miaraka. Tsy vitan’ny hoe ny olona fotsy, ary na dia izaho intsony muted ny vehivavy, miaro tena sy ny teny, na inona na inona ny fiaraha-monina sy ny fahitalavitra milaza ho manao hetsika ity. Salama, ny olon-tiany Koreana. Mihevitra aho fa izany dia miankina be dia be amin’ny olona. Izany dia tsara, raha ny marina, dia mihevitra ahy toy ny Andriambavy. Tsy azoko koreana, aho global. Ary fantatro fa misy namana be dia be (samy koreana ary Filipina). Fantany ny momba ahy. Mino aho fa tsy ny rehetra Koreana dia tsara vintana, na tsara vintana fotsiny. Misy zavatra iray tsy toy ny momba izany. Izy no manangana ny feony eo afovoan’ny ny lohahevitra. Toy izany koa ho ahy sy ho anao. (lahy sy vavy), aho dia alaim-panahy hilaza azy ho tony, fa hoy izy. Izany no ara-dalàna ho azy. Hoy aho hoe izany no tsindraindray. Fantatro izany dia midika hoe miezaka ny hanova azy, satria izy efa velona ao Filipina nandritra ny fotoana ela. Nilaza ny Koreana sasany dia tsy mahafantatra ny fomba hiatrehana ny vehivavy, ireo bebe kokoa maka ny fomba tandrefana noho izy ireo ray aman-dreny ny taloha izao tontolo izao, ary mety indrindra dia tsy hahita azy ireo, ary efa nianatra ny karazana hetsika ao amin’ny lovia miaraka aminy. Fantatro fa tsy marina izy io. Raha vao nandeha hihaona amin’ny tanora, ny koreana-Amerikana.
Fantatro ny fomba tokony hitondrana ny vehivavy. Mitodika amin’ny sasany Barry fotsy, hanompo ny sasany divay, ary haka ny vehivavy mpikarakara Tokantrano izay mamoy fo. Manana namana iray aho izay nandeha tany Seoul ho an’ny fifanakalozana sy nihaona tamin’ny koreana nandritra ny fotoana ela. Toa tsara sy ny rehetra, fa indray mandeha ianao dia hahafantatra ny namany, ary izy no tena lavitra sy mangatsiaka manoloana azy.
Ny rahavavy manambady koreana ny olona izay tsy tapaka nanararaotra azy. Rehefa mivory ny fianakaviana nandritra ny fety, ny vadiny koreana, ny rahavaviny am-bava ompa ny rahavaviko eo anoloan’ny antsika rehetra. Amin’izao fotoana izao ny herisetra am-bava noho izany ny olona ao koreana dia hetsika izay matetika miseho eo amin’ny fianakaviana réunion. Isika rehetra no naka azy ho toy ny raha toa ka ara-dalàna ankehitriny. Tsy misy afaka milaza na inona na inona satria ny anabaviko dia milaza fa izy sy ny vadiny koreana no tena tsara. Izy tsy mamaky sambatra, na ny talohan’ny fampakaram-bady. Na dia izany afa-tsy ny tantara an-tsehatra isika, dia tokony hieritreritra izy fa ny fototry ny tantara an-tsehatra foana ny kolontsaina pop, ary ny sasany amin’izy ireo dia taratry ny zava-misy. Angamba izany no zavatra tokony hatao amin ny sainao, ary nentina niakatra ho eo amin’ny fiaraha-monina, amin’ny alalan’ny ray aman-dreniny, noho ny namana, any am-pianarana. Manimba ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, ny hosoka, na ny fitaka, ny hosoka, na dia niezaka ny hosoka, ny zaza, ny kolikoly, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, diso na mampidi-doza, ny hosoka, na ny jono, hanimba ny ankizy, ny fampiasana ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, ny hosoka, na ny fitaka, ny hosoka, na ny jono
← Ny zavatra tokony ho fantatrao alohan'ny hanombohanao ny filalaovana fitia niaraka tamin'ny tovovavy iray koreana Mampiaraka toerana
Shina Chat Room - China Chat - Online Vahiny webcam any amin'ny karajia →